Gaming Tshintsha Abantu ke Booth Cashier Job Inkcazelo / Imisebenzi noxanduva Template - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Gaming Tshintsha Abantu ke Booth Cashier Job Inkcazelo / Imisebenzi noxanduva Template
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 7 izimvo 1,705 Views
cash Exchange, ivezwa, kunye chips customersA iidola. Ngaba akhuphe ukufumana utyikityo lwe kumthengi bill kunye ukufunjathiswa. Ukuze ubale nemali irhafu bagi, okanye asebenzise i kwigunjana kwindawo kumatshini slot kwaye unikezele ebhankini imali lokutshintsha njengaba ukususela ekuqaleni senyathelo.
Vumela dollar kunye nemali yorhafiso bagi.
Ukugcina iirekhodi ezifanelekileyo nobuyiswano yentengo, ugunyaziso imihlobo, nokwabelana ezikhombisa.
Tshintsha credit, and chips nabaqhubi, kunye nokudala ulungise kubathengi.
Phulaphula abaphumeleleyo ukuze iintsimbi jackpot qwa kunye ukufunjathiswa ingxaki.
Gcina ukhuselo yenja ngokuhambelana nemigaqo.
Luhlanganise Shwankathela imihla zibe ukuba iincwadi uzinzo.
Workin apho ifumaneka slot-oomatshini khangela ummandla wabelwa kumgangatho yekhasino.
Zuza clientsA amakhasi kwi iirisithi xa intlawulo Zizigqithile mali zizonke slot-kumatshini.
chips Offer yokudlala, amatikiti kubaxhasi kwabanye abasebenzi ukuze Resell, okanye kubaxhasi, okanye izincomo.
Ukumisela nxaxheba bafumana okanye ubekwe yi yi nongezelele chips.
Ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa imali-yebhanki ukususela ekuqaleni transfer ngamnye ukuguqula abantu.
Thatha izicelo ngetyala kwaye uqinisekise iimbekiselo ngetyala ukuba unikeze ukuhlola-bakhupha ukwamkeleka okanye ukuseka akhawunti indlu credit.
Phumeza ezifana umzekelo sisuse kwemikrozo imali, ukulungiswa encane slotmachines.
Career izinto Kuyimfuneko
Isicatshulwa-Ukwazi walungisa izivakalisi kunye nemigca e amaxwebhu anxulumene nomsebenzi.
ulwazi Ukuphulaphula Anika Active epheleleyo oko bathi abanye abantu, yokufumana ixesha siqonde izinto eyenziwayo, imiba becela elungile, kwaye zange mesmerizing afika ukuba azamkelekanga.
Publishing-Ephepheni ngokufanelekileyo ukuba iimfuno isihlwele ethetha ngempumelelo.
Ukuthetha-Ukuthetha nabanye ukuze adlulisele inkcazelo eyiyo.
Mathematics-Ukusebenzisa maths ukuba ukulungisa iingxaki.
Science-Ukusebenzisa izisombululo kunye nemithetho ezilawulwa ukusombulula iingxaki.
Sicinga ukuba sezizathu-Ukusebenzisa kunye nezizathu ukunakana iinzuzo kunye nengeloncedo iziphumo, ezizezinye enye okanye iindlela ukuba iingxaki.
ukubaluleka Learning-ukusiqonda inkcazelo entsha Iyasebenza ngokuphathelele ekusombululeni iingxaki kunye kwezigqibo ngalinye elikhoyo kunye elizayo.
Ukufunda Iindlela-Ukukhetha kunye nokusebenzisa iindlela trainingORinstructional neenkqubo ezifanelekileyo xiyimo xa befunda okanye iingongoma zokufundisa ezintsha.
Ukukhangela-Monitoring / Ukufumana ukusebenza ngawe, abantu abongezelelweyo, okanye iinkampani ukwenza izincedisi okanye iqwalasele amanyathelo okulungisa.
Social Perceptiveness-Ukwazi kwabanye’ reactions kutheni kusabela kuba benza kunye ekuqondeni.
Ukweyisela-ekukholiseni abanye ukuba ukuphucula indlela yokuziphatha okanye nongqondongqondo zabo.
ZokuHlala-Ukuthatha abanye kunye nokukhangela ukuba abuyisele ombane.
Sokuyalela-Ukufundisa abanye HOWTO ukwenza intshukumo.
Orientation-Ngokugqibeleleyo inkonzo efuna ubuchule ukuba ukunceda abantu.
Advanced Ingxaki-Ukusombulula-Ukumisela iingxaki eziphambili kunye nokuphengulula ulwazi into enxulumene baphonononge kwaye ukwakha ezinye kwaye asebenzise izisombululo.
Imisebenzi Evaluation-zokuhlola kwiimfuno ngumba isisombululo ukudala isimbo.
Technology Design-Technology ukuba ukusebenza ngamnye kunye nokuseka izixhobo okanye ukwenza iminqweno.
Izixhobo izixhobo Ukhetho-Ukumisela uhlobo izixhobo kwafuneka ukuba benze umsebenzi.
Yezavenge-Ukufaka izixhobo, imishini, zikagesi, okanye iinkqubo ukuhlangabezana iimpawu ngokubanzi.
iiphakheji computer Programming-Ukubhala ngeenjongo ezahlukeneyo.
Operation izibambo Monitoring-Z, nokuhlolwa, okanye iimpawu ezahlukileyo ukuqinisekisa ukuba izixhobo isebenza kakuhle.
Ukusebenza kunye nemisebenzi iimveliso okanye iinkqubo Lawula-Ukuthintela.
Isondlo-Performing nokuyicoca oko kuyinto eqhelekileyo kwezi mveliso zijongwayo xa yaye luhlobo luni yokunakekela kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukukhetha izizathu iimpazamo yokusebenza ukhetha ukuba uqhubeke njani na ngayo.
izixhobo okanye iindlela Ukubuyisela-Ukulungisa kusetyenziswa izixhobo ezifunekayo.
Umgangatho Wolawulo Examination-Ukwenza uvavanyo nohlolo izinto, iinkonzo, okanye iinkqubo ukuba ukuvavanya umgangatho okanye ukusebenza.
View kunye Decisionmaking-ingqalelo amaxabiso othelekiso kunye eziluncedo yezenzo ukuba kungenzeka ukuba ukhethe eyona ilungelene.
Uhlalutyo-Ukuchonga uphuculo nje ngayo ekubekeni, imisebenzi, neemeko ziya kuchaphazela iziphumo kunye luhlobo luni yokuzenza kufuneka enze.
Methods Analysis-Ukuchonga iindlela okanye amaza yokusebenza kunye olufanelekileyo okanye imisebenzi ukuze kuqiniswe ukusebenza, xa kuthelekiswa neenjongo zenkqubo.
Timemanagement-Ukulawula isihlandlo likaThixo kunye nabanye’ period.
Imisebenzi Imali-isigqibo ngendlela iidola ziya kuqiniswa ukuze ufumane umsebenzi ugqityiwe, sezimali ezi ndleko.
Imisebenzi ye iziyobisi Resources-Ukufuna lufunda ukuya ukusetyenziswa ifanelekileyo kwezixhobo iinkonzo, kunye namacandelo izinto ezifunekayo ukuze wenze umsebenzi othile.
Imisebenzi ye Workers Resources-Ukuvusa, ekuphuhliseni, kwaye uzimisele abantu njengoko besebenza, lalatha abantu abaphezulu ukuba umsebenzi wakho.
Degree High School Senior (okanye kuGedaliya okanye School Certificate ukulingana seMatriki)
Ngaphantsi-ngaphandle Diploma High School
Phele Abanye – 88.32%
Ulungelelaniso Social – 86.73%
Ukuzibamba – 92.31%
Ukuqaphela Iinkcukacha – 91.95%
inkululeko – 84.99%
Intuthuko – 86.97%
Thinking kohlaziyo – 87.80%
February 7, 2019 e 8:11 pm
May 2, 2019 e 10:05 pm
Pingback: Does Your Resume Scream| | uphuma-ngaphantsi